ဘီလ်ပြီးတော့အကောင့် collector ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့ဂျော့ဘ် – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ဘီလ်ပြီးတော့အကောင့် collector ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်ယူမှု Template ပြီးတော့ဂျော့ဘ်
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized 1 မှတ်ချက် 438 views
Find နှင့်ပို့ခြင်းဖြင့်ရက်ကျော်နေပြီချိန်ခွင်၏ clients များအကြောင်းကြား, တယ်လီဖုန်း, သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအလည်အပတ်ခရီးပြန်ဆပ်မြှူဆွယ်တောင်းခံရန်. လုပ်ငန်းတာဝန်များ buyeris အကောင့်ငွေပေးချေမှုနှင့်ပို့စ်ငွေပမာဏကိုလက်ခံရရှိပါဝင်သည်; ဖောက်သည်မဖြေပါဘူးဆိုရင်အကြွေးရုံးသို့တောင်းဆိုမှုများပြင်ဆင်နေ; foreclosure ဖြစ်ပွားမှုစတင်သို့မဟုတ်နှင့်စီးရီးများနှင့်ဂုဏ်သတင်း၏မှတ်တမ်းများစာရွက်စာတမ်းများဆက်ပြီး.
နှောင်းပိုင်းတွင်အစီရင်ခံစာများဖော်ထုတ်စစ်ဆေး, PCs အသုံးချဖို့အဖြစ် automated အစီအစဉ်များအမျိုးမျိုး.
အမျိုးမျိုးကြိုးစားမှု၏ရပ်တည်မှုနှင့်စားသုံးသူစီးပွားရေးအနေအထားနှင့် ပတ်သက်. စာရွက်စာတမ်းသတင်းအချက်အလက်.
တယ်လီဖုန်းဖြင့် delinquent ဖြစ်ကြောင်းအကောင့်အသစ်များ၏ဝယ်လက်ကိုရှာပါနဲ့အကြောင်းကြား, အီးမေးလ်က, သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ခရီးစဉ်ငွေပေးငွေယူရရှိရန်.
ကြွေးမြီပြန်ဆပ်ဘို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်မဟာဗျူဟာ၏ clients များပဲ့ပြင်.
ထုတ်ကုန်ပြန်သွားဖို့ဖောက်သည်စည်းရုံး, သို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းကိုပြည်နယ်များအပေါ်မရှိစေရန်ပမာဏဆပ်ဖို့, အကြွေးဝယ်မှတ်တမ်းများ, သို့မဟုတ် nonpayable အကဲဖြတ်.
အမျိုးအစားနှင့် file ကိုစာပေးစာယူနှင့်အထွေထွေစာရွက်စာတမ်းတာဝန်များကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စာပေးစာယူအစီရင်ခံစာများ addressing ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအဖြစ်လုပ်ဆောင်သွားရန်.
သတ်မှတ်ထားသောအကောင့်နှင့် ပတ်သက်. တော်တော်များများ admin ရဲ့ features တွေကျင်းပ, ဥပမာအားထှကျသှားစားသုံးသူများ၏ဒေတာ purging နှင့်တိုးတက်မှုများကိုကိုင်တွယ်ထုတ်လုပ်.
အကြွေးပြန်ဆပ်တောင်းဆိုခြင်းသို့မဟုတ်အခြေချကြိမ်ခွဲခြားသတ်မှတ်, ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဖြစ်ကြောင်း buyersA အခြေအနေများအပေါ် predicated.
ဆောင်းပါးအလုပ်ခွင်မှာတောငျးဆိုခွငျးအားဖွငျ့လတ်ဆတ်တဲ့လက်ကိုင်ဖို့ဆိုးသွမ်း clients များခြေရာကောက်, ဖုန်းကိုကုမ္ပဏီများ, အကြွေးအစီရင်ခံအေဂျင်စီများ, သို့မဟုတ်အိမ်နီးချင်းများ၏တောင်းဆိုနေတာမှတဆင့်.
သူတို့ရဲ့အကောင့်နှင့်အတူပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. ဖြေရှင်းချက် client ကိုစိုးရိမ်ပူပန်.
ရန်ပုံငွေများ Get နှင့် client ကိုအကောင့်မှပေးချေပမာဏတင်ပြရန်.
မလိုအပ်သည့်အခါအကြွေး extensions တွေကိုညှိနှိုင်းရန်.
အချက်ပေးအကြွေးဌာနများ, ဝယ်ယူပစ္စည်းများ repo သို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုအဆက်ဖြုတ်, နှင့် turn-ကျော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသတင်းအချက်အလက်ရှေ့နေများမှဖောက်သည်များလျစ်လျူရှုရွေးချယ်ရေးကြိုးစားမှုတုံ့ပြန်ရန်လာသောအခါ.
ဆက်သွယ်ရန်ကုမ္ပဏီများတောင်းဆိုမှုများရန်ပုံငွေအနေအထားအပေါ်စစ်ဆေးနှင့်တောင်းဆိုမှုများအပေါ်ငြင်းပယ်မှုအတွက်အယူခံဝင်စကားလုံးများကို compose ဖို့.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားလူစုစုပေါင်းအာရုံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အခိုင်အမာအဘယျသို့,, သငျသညျထုတ်လုပ်လျက်ရှိခြင်းအရာတို့ကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့အတှကျအခြိနျသုံးပြီး, မှန်ကန်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုအံ့သြ, အစားမမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းအခါသမယမှာကြားဖြတ်ထက်.
Active ကို-သင်ယူ-အသိပညာတစ်ခုချင်းစီကိုမကြာသေးမီနှင့်အလားအလာရှိသောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. အသစ်သောဖြစ်ရပ်မှန်များ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်.
သို့ချဉ်း ကပ်. -ရွေးချယ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောပြဿနာများကိုနားလည်သဘောပေါက်သို့မဟုတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးသည့်အခါပြဿနာများအတွက်သင့်လျော်သော educationORtutorial ချဉ်းကပ်မှုနှင့်နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု..
ကုမ္ပဏီတွေရဲ့စစ်ဆေးခြင်း-CheckingOREvaluating ထိရောက်မှု, အပိုဆောင်းတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကုစားခြေလှမ်းများယူသို့မဟုတ်တိုးတက်မှုဖန်တီးရန်.
လူမှုသူတို့လုပ်ပေးအဖြစ်သူတို့ကိုတုံ့ပြန်ဘာဖြစ်လို့ othersI တုံ့ပြန်မှုသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့် သိ..
တစ်ဦးချင်းစီကိုထောကျပံ့ဖို့မဟာဗျူဟာရှာဖွေနေ Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-ကွိုးစား.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာအနုစိတ်ကိစ္စများ-ဖော်ထုတ်ခြင်းဖြေရှင်းခြင်းနဲ့ options အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်လေ့လာပြီးနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေထုတ်လုပ်ရန်ဆက်စပ်ဒေတာကိုပြန်လည်သုံးသပ်.
လုပျထုံးလုပျနညျးသုတေသန-လေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဖြေရှင်းချက်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့် layout ကိုလုပ်လို.
installation-ထည့်သွင်းခြင်းစက်တွေ, devices များ, cabling, လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
အမျိုးမျိုးသောဖြစ်ကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့် ပတ်သက်. programming-ရေးသားကွန်ပျူတာ packages များ.
function ခြေရာကောက်-ကိုကြည့်ရှုခြင်း dial, စမ်းသပ်မှုများ, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်ညွှန်းကိန်းသင့်လျော်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့စက်လည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာထုတ်ကုန်အပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုအကို Maintenance-ပွုလုပျခွငျးအခါနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၏အဘယ်အရာကို type ကိုလိုအပ်သောဖြစ်လာအဆုံးအဖြတ်.
ပြဿနာများကို functioning နဲ့ကမဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာလုပ်ရမှန်းအဆုံးအဖြတ်၏ troubleshooting-ဆုံးဖြတ်အကြောင်းတရားများ.
မရှိမဖြစ်သောအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချဖို့ Mende-Restoring မော်ဒယ်များသို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-ကွပ်မျက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏စမ်းသပ်ခြင်း, ပံ့ပိုးပေး, သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်မှ.
စနစ်များလုပ်ကိုင်ရမယ်နည်းလမ်းကိုအဘယ်သို့သောအားသုံးသပ်ခြင်း-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် setting ကိုအတွက်ပဲဘယ်လိုပြုပြင်မွမ်းမံ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, လည်းအခြေအနေများအကျိုးကျေးဇူးများကို impact ပါလိမ့်မယ်.
ဝင်ငွေပြုမိ task ကိုရရှိရန်အသုံးပြုစေဖွယ်ရှိသည်ကိုမည်သို့ချွေတာသုံးစွဲ-ဖော်ထုတ်ခြင်း၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ဤအသုံးစရိတ်များများအတွက်စာရင်းရေးသွင်းခြင်း.
ပစ္စည်းနည်းလမ်းများ-receiver နဲ့အဆောက်အဦများ၏မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုများအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, tools တွေ, နှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုတိကျသောအလုပ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်.
ဝန်ထမ်းများအရင်းအမြစ်များ-ရယူ၏ကြီးကြပ်မှု, လှုံ့ဆျောမှု, သူတို့အလုပ်လုပ်သောကွောငျ့ပုဂ္ဂိုလ်များလမ်းညွှန်, ကြောင်းအလုပ်များအတွက်အထိရောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖျောထု.
တစ်ဦး High School တွင်ဒီဂရီထက်သိသိသာသာလျော့နည်း
Connect ကိုရဲ့အဆင့် (သို့မဟုတ်နောက်ထပ် 2-နှစ်ဒီပလိုမာ)
အောင်မြင်မှု / လုပ်ငန်း – 91.80%
ဆုံးဖြတ်ချက် – 92.97%
ကြိုးစားအားထုတ်မှု – 93.25%
ခေါင်းဆောင်မှု – 90.37%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 89.61%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှု – 86.17%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 92.63%
ဖိအား Threshold – 93.62%
ပါဝင် – 92.19%
Depth ၏အသိအမြင် – 90.89%
ခွန်အား – 90.02%
လွတ်လပ်ခြင်း – 92.67%
တီထွင်မှု – 85.37%
စဉ်းစား – 90.84%
ဧပြီလ 29, 2019 တွင် 8:38 ညနေ